Madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada oo shir uga furmaya Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada oo shir uga furmaya Muqdisho
3rd February 2018 A warsame Af Soomaali 0
Madaxda dowlad goboleedyada ayaa ku soo wajahan magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya, halkaasoo maalmaha soo socda uu ka furmi doono shir u dhaxeeya Madaxda dowladda Dhexe iyo dowlad goboleedyada.
Shirkan ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin dhaqan gelinta dhismaha ciidamada qaran, wadaaga kheyraadka, dib u eegista dastuurka, hanaanka doorasho ee hal qof iyo hal cod ee la rejeynayo in dalka ka dhacdo sanadka 2020.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa illaa berri ku soo gaari doona magaalada Muqdisho, sida ay sheegayaan ilo wareedyo ku dhow dhow Madaxtooyada.
Wararka ayaa intaa ku daraya in shirka ay ka qeyb qaadan doonaan Wakiilada Beesha Caalamka.
Diyaarad la sheegay inay ku dhacday meel ku dhaw degmada Wanlaweyn ee Gobolka Sh/Hoose
South Sudan: European Union adds 3 persons involved in serious human rights violation to sanctions list